I-630 sqm villa yokunethezeka - 30min ukuya eHamburg- iibhedi ezingama-33
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMaxi
Sinikezela nge-630 sqm ye-villa yokunethezeka embindini wendalo eneembono ezintle kumasimi kunye nokutshona kwelanga okuhle. Yimizuzu engama-40 kuphela ukuya kumbindi wesixeko saseHamburg. Ukulala ukuya kutsho kubantu abangama-33. I-sauna, ibha epholileyo, indawo yomlilo, i-oveni kunye nebala lokudlala elihle labantwana!
Yiza undwendwele indlu yethu enkulu kakhulu nexhotyiswe kakuhle ekwilali yaseMantla-Jamani kodwa kuseyimizuzu engama-30 kuphela ngemoto ukuya kwimetropole Hamburg.
Sinika iindwendwe zethu ikhitshi yanamhlanje, igumbi lokuhlala le-100 sqm kunye nesilingi ngaphezulu kwe-7m ukuphakama kunye netshimini enkulu nevulekileyo, indawo yokuphumla epholileyo kunye ne-SAT TV, iqoqo elikhulu leencwadi kunye nemidlalo ye-parlor, amagumbi okulala ayi-10, amagumbi okuhlambela ayi-7.
Yonwabela ibha epholileyo kunye ne-sauna epholileyo. Ilinen yebhedi kunye neetawuli zibandakanyiwe kwixabiso. I-W-LAN ifumaneka simahla.
Abantwana bamkelekile kakhulu (sinayo ibhedi yomntwana kunye nezinto zokudlala ngokunjalo)!
Siyazingca nge-8000 sqm yegadi yethu, ii-apile zethu, amaqunube kunye neemirabelles. Isitiya sethu zininzi kwaye sinothando kwaye sizama ukunika izinambuzane kunye nezilwanyana ezincinci indawo yokuhlala. Yiyo loo nto siphila intanda-bulumko yesitiya esigqityiweyo sendalo. Yiza usityelele ukuze sihlale siphumle! Sijonge ukukubona.
Ubume bendawo yethu izolile kwaye izolile, awuziva uxinezelekile kodwa usekufutshane nayo yonke into oyifunayo. IsiXeko sase-Elmshorn (imizuzu emi-5 ngemoto) inayo yonke into oyifunayo: ivenkile enkulu, ikhemesti, i-H&M, imarike yomfama, izibuko elincinane njl.njl.
Iivenkile zamafama, iindlela zebhayisekile, ukukhwela amahashe, iidykes, Elbe river beach kufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Maxi
Ungaqhagamshelana nathi emva kokufika kwakho ukuba unayo nayiphi na imibuzo kwaye sizama okusemandleni ukukunceda. Umoya opholileyo kunye noqhelekileyo.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$901
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Seester